Sun, Jul 5, 2020 at 2:19am
जो निद्रामा घरसँगै बगे
काठमाडौँ, ९ साउन । आकाश गर्जिएर सोमबार साँझदेखि नै मुसलधारे पानी बर्सिरहेको थियो । सत्यवती–३ सिङीकी तिलकुमारी तरामुले साँझ नपर्दै छोराछोरीलाई खाना खुवाइन् । केहीबेर भारतमा रहेका श्रीमान् तिलबहादुरसँग फोनमा कुरा गरिन् । ठूलो पानी परिरहेको सुनाइन् । त्यसपछि सुत्ने तर्खरमा लागिन् । दुई कोठाको सानो घर । माथिल्लो तलामा सुत्न नमिल्ने भएकाले सामान मात्र राखिन्थ्यो । तल भान्सामै एउटा र अर्को..
डेटिङ एपमा श्रीमानले आफ्नै श्रीमती भेटेपछि...
काठमाडाैं, ८ साउन । टिन्डर एप्लिकेशन अर्थात डेटिङ एप पछिल्लाे समय पुवापुस्तामा निकै लाेकप्रय बन्दै गएकाे छ । टिन्डर एप्लिकेशन डेटिङको लागि प्रचलित एप हो। हालै एक युवाले टिन्डर चलाइरहेका थिए। टिन्डरमा युवती खोज्दै जाँदा उनको भेट आफ्नी श्रीमतीसँग भयो। १४ महिना अगाडिमात्र उनीहरुको विवाह भएको थियो। श्रीमती व्यापारको सिलसिलामा एक हप्ता अगाडिमात्र बाहिर गएकी थिइन्। तर, जब आफ्नी श्रीमतीलाई टिन्डरमा ती व्यक्तिले देखे। उनी..
संसद भवनमा प्रयोग भएको कण्डम ! सांसदहरू भए रातोपिरो !!
लण्डन, ८ साउन । बेलायती संसदमा प्रयोग गरिएको कण्डम नै फेला परेपछि हंगामा नै मच्चिएको छ । बेलायतको संसद भवनमा प्रयोग भएको कण्डम भेटिएपछि हँगामा भएको हो । बेलायती संसदमा प्रयोग गरिएको कण्डम नै फेला परेपछि हंगामा नै मच्चिएको हो । सन्डे टाइम्सले जनाएअनुसार सांसदहरू संसदमा प्रयोग भएको कन्डम बोकेर आउने गरेको खुल्न आएको छ । यो खुलासा उक्त कार्यालयमा सरसफाईको काम गर्ने कामदारहरूले..
हेटौँडा, ८ साउन। मकवानपुरमा रातिदेखि फेरि भीषण वर्षा भएको छ । वर्षाले मकवानपुरका कतिपय बाटोहरु अवरुद्ध गरेको जनाइएको छ । असारमा आएको बाढीले बगाएर १२ दिनपछि सञ्चालनमा आएको हेटौँडा पदमपोखरी सडकको डाइभर्सन बगाएपछि पदमपोखरी तथा मनहरि गाउँपालिकाका कतिपय वडाहरुको हेटौँडा आवतजावत बन्द भएको छ । त्यस्तै हेटौँडाको कर्राखोलामा आएको बाढीले एक भारतीय गाडी बगाएको प्रहरीले जनाएको छ । शिवम् सिमेन्टको कच्चा पदार्थ..
जग्गा हडप्न कर्मचारी, व्यापारी र जनप्रतिनिधिकै सेटिङ
काठमाडौँ, ८ साउन । व्यापारी ईश्वरी पराजुलीले तुलसीराम पौडेलसँग इटहरी–६ ‘घ’को कित्ता नं. ८९ बाट जग्गा किने। पराजुलीले मालपोतका अमिन योगप्रसाद सुवेदीको मिलेमतोमा नक्सा परिवर्तन गरी आफ्नो नाममा झन्डै पाँच कट्ठा जग्गा हडपेको भन्ने उजुरी प-यो। पौडेलसँग किनिएको कित्ता नं. ८९ बाट पराजुलीले इटहरी–६ ‘घ’कै कित्ता नं. ८७ मा नक्सा परिवर्तन गराएको दाबी गर्दै उजुरी परेको थियो। सोही उजुरीमाथिको अनुसन्धानका लागि..
गुल्मीमा पहिरोः ६ जनाको मृत्यु, ५ बेपत्ता
काठमाडौँ, ७ साउन । गुल्मीमा पहिरोमा परेर ६ जनाको मृत्यु भएको छ भने ५ जना बेपत्ता भएका छन् । सत्यवति गाउँपालिकाको लिम्घा र ठुलो लुम्पेकमा पहिरो गएो हो । पहिरोले ढाल बहादुर विक, छलि विक र पम्फा विकको घर पुरेको छ । तीन घरमा नौ जना बस्दै आएका थिए । तीन घरबाट चार जनाको शव फेला परेको छ । बाँकी पाँच जना..
झिंगाले किन खुट्टा रगड्छ ? जानेर छक्क पर्नुहुनेछ !
काठमाडौँ, ६ साउन के तपाईले झिंगाको एउटा अनौठो व्यवहार याद गर्नु भएको छ ? छैन भने पनि याद गर्नुहोस्– बसेको बेला झंगाले सधैं आफ्नो खुट्टा एक आपसमा रगडिरहेको हुन्छ । आखिर झिंगाले यसरी अचम्मसंग खुट्टा रगड्नुको को रहस्य के होला ? झिंगाले त्यसरी खुट्टा रगड्नुको रहस्य गज्जबको छ । त्यसले आफ्नो खुट्टाको चिलाई मार्न वा मालिस गर्न त्यसरी खुट्टा रगडिरहेको हुँदैन ।..
तस्बिर प्रकरणमा साम्राज्ञीले आलोचकलाई 'कुकुर'को संज्ञा दिएपछि...
काठमाडौं, ६ साउन । छुट्टी मनाउन इन्डोनेशियाको बाली पुगेकी साम्राज्ञी साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाह प्रेमी देवाङ्क राणासँग खिचाएको अन्तरङ्ग तस्बिरका कारण विवादित बनिन् । अभिनेत्री शाहको यति बेला चारै तिर आलोचना भइरहेको छ । रातो विकनी लगाएको सार्वजनिक केही तस्बिरमा प्रेमी देवाङ्कले उनको ओठ, छाती र कम्मरको पछाडिको भाग चुमेका छन् । यो तस्बिर सार्वजनिक भएपछि सामाजिक सञ्जालमा उनलाई आलोचनादेखि ट्रोल बनाएर उठाउनेसम्मका क्रियाकलाप भएका छन्..
यस्ता राशि भएका पुरुषले पाउँछन् सुन्दर श्रीमती, तपाईको कुन ?
एजेन्सी, ६ साउन । राशिअनुसार पनि पुरुषले सुन्दर महिला पाउने विषय शास्त्रमा उल्लेख गरेको पाइन्छ । तुला राशि सुन्दर श्रीमती पाउनुलाई भाग्यसँग जोडिन्छ । र त्यसआधारमा तुला राशि भएका व्यक्ति सबैभन्दा भाग्यमानी मानिन्छन् । तुला राशि भएका व्यक्ति धेरै इमोशनल र समझदार हुन्छन् । यस्ता राशि भएका व्यक्तिको प्रमुख विशेषता हो कि यीनिहरु आफ्नो पार्टनरसँग गहिरो सम्बन्ध स्थापित गर्न सफल हुन्छन् । कन्या..
बाघ एउटा घरको ओछ्यानमा आराम गर्न आएपछि
आसाम, ५ साउन । भारतको बाढीग्रस्त आसाम राज्यको एउटा राष्ट्रिय निकुञ्जबाट भागेको बाघ एउटा व्यापारीको पसल रहेको घरभित्र ओछ्यानमा आराम गरिरहेको अवस्थामा भेटिएको छ। उक्त घरका मालिक र उनको परिवारले बाघलाई घरभित्र आउँदै गरेको देखेपछि घर छाडेर भागेका थिए। वन्यजन्तु अधिकारीहरूले सार्वजनिक गरेको भिडिओमा टिनको छानोमा रहेको एउटा प्वालबाट बाघले बाहिर चियाइरहेको देखिन्छ। उक्त बाघ बाढीले प्रभावित काजिरङ्गा राष्ट्रिय निकुञ्जबाट भागेको थियो र सुख्खा..
यी युवतीहरु तपाईका लागि योग्य होइनन् !
काठमाडौँ, ५ साउन । हामीलाई अक्सर हामी कस्तो मानिससँग जोडिएका छौँ भन्ने कुराले सताउने गर्छ । किनकी कुनैपनि सम्बन्ध राम्रो हुन दुवैको समान भूमिका र जिम्मेवारी रहेको हुन्छ । उही पुरानै उखानको याद आउँछ कि 'एक हातले ताली बज्दैन' । र मानिस कस्तो मान्छेको साथमा बाँकी जीवनको सुनौलो कल्पना गर्दैछ भन्ने कुराले उसलाई बेलाबेलै गम्भीर बनाउने गर्छ । प्रेम सम्बन्ध, वैवाहिक..
बुढेसकालमा आर्मी बन्दै धोनी !
एजेन्सी, ५ साउन भारतीय टोलीका पूर्व कप्तान महेन्द्र सिंह धोनीले दुई महिना भारतीय आर्मीको तालिम लिने बताइएको छ । विश्वकपपछि सन्यास लिने धेरैको अनुमान थियो । तर धोनीले तत्काल सन्यास नलिने उनका म्यानेजर अरुण पाण्डेले बताएका छन् । धोनी आगामी दुई महिना क्रिकेटबाट भने टाढा रहने छन् । धोनी स्वयंले तत्काल क्रिकेट करियरबाट सन्यास नलिने पनि बताएका छन् । भारतले छिट्टै वेस्ट इन्डिजबिरुद्धको..
प्रेमीले उपहारमा नयाँ आइफोन नदिँदा प्रेमिकाले हानिन् बारम्बार झापड (भिडियो)
काठमाडौँ, ५ साउन । एक चीनियाँ प्रेमीले प्रेमिकालाई आइफोन नदिएपछि सार्वजनिक स्थानमा हिंसा सहनुपरेको छ । प्रत्येक तीन वर्षमा एकपटक मार्च महिनाको २० तारिखमा चीनमा भ्यालेन्टाइन्स डे मनाइन्छ । तर सिचुवान प्रान्तका एक जोडीले प्रेम दिवसलाई भिन्न तरिकाले मनाए । नजिकै जडान गरिएका सिसिटीभी क्यामराका साथै त्यहाँ उपस्थित मानिसले खिचेको भिडियो पछि सोसल मिडियामा सार्वजनिक गरियो । उक्त भिडियोमा एक युवतीले..
बेपत्ताको भएको ९१ वर्षपछि काजकीरिया !
काभ्रेपलाञ्चोक, ४ साउन बेपत्ता भएको ९१ वर्षपछि ‘मृत्यु’ भएको मान्दै नमोबुद्ध नगरपालिका–८ डराउनेपोखरीस्थित अधिकारीथोकका एक परिवारका सदस्यले हिन्दू संस्कारअनुसार काजकीरिया थालेका छन् । जन्मले १०० वर्ष पुग्नुभएका नन्दीकेशर अधिकारी (बैकुण्ठ)को हिन्दू संस्कारअनुसार काजकीरिया थालिएको हो । गत मङ्गलबार कुशको ‘शव’ बनाएर अधिकारीको अन्तिम संस्कार गरिएको छ । सोही दिनदेखि नन्दीकेशरको भाइका एक नाति कुमार अधिकारी कोरा बारेर १३ दिनकै कीरिया बस्नुभएको छ । मान्छेको..
अरबमा अमेरिकी सेना राख्न साउदी राजाले दिए स्वीकृति
रियाद, ४ साउन । सिन्ह्वा साउदी अरबका राजा सल्मान बिन अब्दुलाजिज अल–साउदले अमेरिकी सेना साउदी अरबमा तैनाथ गर्न स्वीकृती दिनुभएको छ । साउदी प्रेस एजेन्सीले शुक्रबार दिएको जानकारी अनुसार क्षेत्रीय सुरक्षा र शान्ति स्थापनाका लागि सहकार्य गर्नुपर्ने भएकाले अमेरिकी सेनालाई स्वीकृति दिएको साउदी राजाले बताउनु भएको छ । अमेरिकी पाँच सय सेना साउदी अरबस्थित प्रिन्स सुल्तान हवाई अखडामा रहने तय गरिएको दुई सुरक्षा..
यी राशिका पुरुषले सजिलै युवतीलाई पार्न सक्छन् आफूतिर आकर्षित !
एजेन्सी, ३ साउन । ज्योतिषशास्त्रका अनुसार केही यस्ता राशिहरु छन् जुन राशिका पुरुषहरु अन्य राशिको तुलनामा निकै नै आकर्षित हुन्छन् । यी राशिका पुरुषहरूले आकर्षणको दृष्टिकोणले बाँकी राशिको सुन्दर भन्दा सुन्दर पुरुषलाई पनि पछाडी पार्दछन् । यी तीन राशिको पुरुषप्रति बढीजसो महिलाहरू केवल प्रेम मात्र दिन तयार नभई उनीहरूलाई पाउनका लागि कुनै पनि हद पार गर्न तयार हुन्छन् । यी हुन् ती तीन..
हाँस्ने तरिकाबाटै थाहा हुन्छ तपाईको स्वभाव र बौद्धिक क्षमता !
काठमाडौँ, २ साउन । हाँसो एक औषधि हो, जसका धेरै फाइदा छन् । तन-मनलाई निखार्नका लागि हाँसो सबैभन्दा उत्तम थेरापी हो । तपाईंले आफ्नो वरपर देख्नुभएकै होला केही व्यक्ति यस्ता हुन्छन् जो हरेक कुरामा हाँस्छन् । र कोही यस्ता पनि हुन्छन् जो हाँसो लाग्ने कुरामा पनि मात्र मुस्कुराउँछन् । समुद्रशास्त्रमा व्यक्तिको हाँस्ने तरिकाको आधारमा उसको स्वभावबारे उल्लेख गरिएको छ । रोकिएर हाँस्ने व्यक्ति केही..
काभ्रे, १ साउन । धुलिखेल नगरपालिका–१ देवीटारमा गए राति बुहारीद्वारा वृद्ध सासूको हत्या भएको छ । राति १० बजे घरायसी विवादका क्रममा सुन्तली तामाङले लछारपछार पार्दै सिमेन्टको भित्तामा टाउको ठोक्काएर ६३ वर्षीया सासु माइलीमाया तामाङको हत्या गरेको इलाका प्रहरी कार्यालय बनेपाका इन्चार्ज प्रहरी निरीक्षक निरञ्जन भट्टराईले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार टाउको र पेटमा गम्भीर चोट लागेको माइलीमायाको उपचारका क्रममा बनेपास्थित शिर..
५ भाइको एक्ली श्रीमती…
एजेन्सी, ३१ असार । छिमेकीमुलुक भारतको देहरादुनकी २१ वर्षीया राजो वर्मा ५ भाइकी एक्ली पत्नी हुन् । जो हरेक रात आफ्ना एक पतिका साथ सुत्ने गर्छिन् । राजोका एक छोरा पनि छन् र उनी आफ्ना पतिसँग खुसी छिन् । त्यस्तै उनका पतिहरुले पनि आफूहरु एक पत्नीकै साथ सन्तुष्ट भएको बताएका छन् । महाभारतमा ५ पाण्डवकी एक्ली पत्नी थिइन्, द्रौपदी । ठीक त्यस्तै पौराणिक..
गाईले फुटबल खेलेपछि (भिडियोसहित)
काठमाडाैं, ३० असार । सँसारका उत्कृष्ट खेलाडीले खेलेको फुटबल हेर्न जो कोही चाहन्छन् । उनीहरुको खेल प्रत्यक्ष वा सामाजिक सञ्जालमार्फत् हेर्नेको संख्या करोडौं हुनेगर्छ । तर, भारतमा गाईले फुटबल खेल्छ । गोवामा कुशल फुटबल खेलाडी बनेको गाईको चर्चा चुलिएको छ । सामाजिक सञ्जालमा गाईले फुटबल खेलेको भाइरल बनेको छ । खुट्टाले बल हान्दै गाईले नाकले नियन्त्रणमा लिएको भिडियो हेर्नलायक छ । गोवामा फुटबल..
एउटै परेवा साढे १५ कराेडमा लिलाम !
काठमाडाैं, ३० असार । हामीले हाम्राे टाेलछिमेकमा परेवाकाे किनबेच गर्ने गरेका छाैं । सामान्यतया एकजोडी परेवाको ५ सय देखि १ हजार रुपैयाँ सम्म किनबेच हुन्छ । तर, एउटा परेवाको मूल्य साढे १५ करोड रुपैयाँ पर्छ भन्दा तपाईंलाई पत्यार नलाग्न सक्छ । याे वास्तविक हाे । युरोपको बेल्जियममा एउटै परेवाको मूल्य साढे १५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी परेको छ । बीबीसीका अनुसार, अर्मान्डो नाम दिईएको एउटा परेवा १.२५..
गाईघाट, ३० असार । पाँच दिनदेखि आएको निरन्तर भीषण वर्षाको कारण उदयपुर जिल्लाको मध्य पहाडी तथा पश्चिमी क्षेत्रका विभिन्न गाउँपालिकामा अहिले डेढ दर्जनभन्दा बढी घर पहिरोले भत्काएको छ भने सयौँ घर उच्च जोखिममा परेका छन् । जिल्लाको मध्य पहाडी क्षेत्रको उदयपुर गढी गाउँपालिकामा गएको पहिरोको कारण वडा नम्बर ४ र ५ मा दशवटा घर पहिरोले भत्काएको र केही घर पहिरोले पुरेको..
धादिङ, ३० असार .। बेनीघाट रोराङ गाउँपालिकाको वडा नं २ ताल्तीमा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको ह्वासिन सिमेन्ट उद्योग गए रातिको बाढीले बगाएको छ । ताल्तीस्थित खोलालाई नियन्त्रण गरी निर्माण थालिएको सिमेन्ट उद्योग तीन दिनदेखिको वर्षाका कारण खोलामा आएको बाढीले बगाएको सूचना अधिकारी तुलसीजङ्ग थापाले जानकारी दिनुभयो । रातिको समयमा आएको बाढीका कारण पाँच जना मजदूर बाढीमा फसेका छन् । दुवैतर्फ खोला बगेकाले बीच..
कुवेतमा तीन नेपालीको मृत्यु
काठमाडौँ, ३० असार । खाडी मुलुक कुवेतको आप्रवासी बस्ने एक अपार्टमेन्टमा आगलागी हुँदा तीन जना नेपालीको मृत्यु भएको छ । सो घटनामा सर्लाहीका विजय बैठा सहित अन्य दुई नेपाली महिलाको मृत्यु भएको कुवेतस्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ । शनिवार राती भएको आगलागीमा अप्सरा कामी र गौरी दर्जी नामका दुई महिलाको मृत्यु भएपनि उनीहरुको नेपाल ठेगाना खुल्न नसकेको बताइएको समाचार समाचारपत्रमा छ । आगलागीबारेको..
सिंहसँग रिस उठेपछि खोरमै गएर चप्पलले पिटे यी म्यानेजरले (भिडियोसहित)
एजेन्सी, २९ असार । भिडियोमा चिडियाघरका म्यानेजर ओलेग जबकोव सिंहहरुको बिचमा भएको देखिन्छ । त्यहाँ करिव ७/८ सिंहहरु थिए, तिमध्ये कोही एकअर्कासँग लडिरहेका पनि देखिन्थे । त्यति नै बेला म्यानेजर रिसाउँदै उनीहरुको बिचमा पुग्छन् । ओलेगलाई देखेपछि सिंहहरु पछि हट्छन्, तर केही भने लड्न छाड्दैनन् । त्यो देखेर ओलेगले आफ्नो चप्पलले एउटा सिंहलाई पिट्न थाल्छन् । सो भाइरल भिडियोमा ओलेग सिंहहरुसँग रिसाउँदै चिच्चाएको..
काठमाडौँ, २९ असार । सडक दुर्घटनामा परेर मलेशियामा कञ्चनपुर शुक्लाफाँटा नगरपालिका–२ ढकनियाका ३६ वर्षीय सुरेन्द्रप्रसाद भट्टको मृत्यु भएको छ । शुक्रबार मलेशियाको शाहआलमको जलान कोटाकेमुनिङ मार्गमा डेराबाट मोटरसाइकलमा काम गर्ने पसलतर्फ जाने क्रममा दुर्घटना हुँदा भट्टको घटनास्थलमै मृत्यु भएको खबर पाइएको वडाध्यक्ष शिवराज पनेरुले बताउनुभयो । आरएल कावालन प्रोमा सेक्युरिटी गार्डका रूपमा कार्यरत भट्टसँगै नुवाकोट घर भई सोही कम्पनीमा कार्यरत शिव दाहालको..
नाम मिल्दा ६ वर्ष कैद सजाय, यसरी तिराइयो अर्काको नामको ८० हजार जरिवाना
काठमाडौँ, २९ असार । ताप्लेजुङ मेरिङदेन–४ का ३७ वर्षीय गणेश हाङगाम लिम्बूले फरार अभियुक्तसँग नाम मिलेकै भरमा ६ वर्ष कैद भुक्तान गर्नुपर्ने भएको छ । प्रहरी र प्रशासनले नै आफूलाई फसाएको भन्दै उनी न्याय माग्न भौँतारिइरहेका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय इलामले हातहतियार खरखजना मुद्दाका फरार अभियुक्त विक्रम भनिने गणेश लिम्बूविरुद्ध तोकेको ८० हजार रुपैयाँ जरिवाना लिम्बूले जेल पर्ने भयका कारण २१..
नक्कली चालक खडा गर्ने चार प्रहरीविरुद्ध मुद्दा
काठमाडौँ, २८ असार । मानिसको ज्यान जानेगरी भएको सवारी दुर्घटनामा संलग्न चालकलाई उन्मुक्ति दिन नक्कली चालक खडा गरेको अभियोगमा नेपाल प्रहरीका निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) सहित सातजनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले शुक्रबार इलाका प्रहरी कार्यालय नवलपरासी (गैंडाकोट) का प्रहरी निरीक्षक लोकबहादुर जिसीसहित सात प्रहरीविरुद्ध विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको हो । आयोगका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाका अनुसार जिसीसहित अपराध अनुसन्धान..
लेखा अधिकृत भागेपछि बेनी नगरपालिकामा खैलाबैला !
गलेश्वर, २७ असार । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सयौँ योजनाको भुक्तानी गर्नुपर्ने बेलामा बेनी नगरपालिकाका लेखा अधिकृत भागेपछि नगरपालिकामा खैलाबैला मच्चिएको छ । एउटा विद्यालयका प्रधानाध्यापकसँगको सामान्य विवादको विषयलाई लिएर नगरपालिकाका लेखा अधिकृत नारायणप्रसाद सुवेदीले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिप्रसाद शर्मालाई साउन ५ गतेसम्मको बिदा लेखेर भागेपछि बेनी नगरपालिकाका विभिन्न क्षेत्रका सयौँ उपभोक्ता समितिले नगरपालिकाबाट पाउनुपर्ने भुक्तानी रोकिएको छ । नगरपालिकाको प्रशासन तथा लेखा शाखामा ..
न्यूजिल्याण्डले धोनीको विकेट लिएपछि हर्ट अट्याकका कारण उनका ‘क्रेजी फ्यान’काे मृत्यु
बिहिवार, आषाढ २६, २०७६ साल
राँची, २६ असार । इंग्ल्यान्डमा जारी क्रिकेट विश्वकपमा सेमीफाइनलमा भएको खेलमा भारत न्युजिल्याण्डसँग पराजित भएपछि हर्ट अट्याकका कारण समर्थकको निधन भएकाे छ । भारत झारखण्डमा जहाँ भारतीय क्रिकेटर महेन्द्र सिंह धोनीका यस्तै ‘क्रेजी फ्यान’ को हृदयघातका कारण बुधबार ज्यान गएको हाे । झारखण्ड किशनगञ्ज निवासी धोनीका ठूला फ्यान अशोक पासवानलाई हृदयघात भएको हो । न्युजिल्याण्डले धाेनीकाे विकेट लिएपछि उनलाई अचानक हृदयघात भएको थियो । क्रिकेटमा यस्तो..
Results 603: You are at page6of 21